Noho ny faneren'ny mpitandro ny filaminana, “miantona amin'izao fotoana izao” ny Beirut Pride 2018 — Beirut Pride
Outlet: Global Voices / Editor: Hassan Chamoun / Translator: Andriamifidisoa Zo / Language: Malagasy / Date of publication: 29 May 2018 / Estimated reading time: 4 minutes 52 seconds.
Haban-tanana zarain'ny Beirut Pride. Loharano: pejy Facebook.
Tamin'ny 12 mey no natomboka ny Beirut Pride 2018 [Rehareha 2018 Beirota], ahitana odiambavafo mankalaza “ireo ray aman-dreny nikajy ny fianakaviany, izay tsy nanary ny zanany rehefa niseho ho pelaka, na farafaharatsiny, nitady ny fianakaviana tsy hisy hiendaka.”
Nefa tamin'ity taona ity, nosakanan'ny Fiarovana Ankapobeny ao Libanona tsy hotontosaina ny lanonana Pride iray—dia ny tantara famakianteny iray— izay nolazaina fa notontosaina tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Nosakanana izany na dia teo aza ny fangatahan'ny teathra tamin'ny Fiarovana Ankapobeny, izay nametraka ho ao anatiny lisitry ny asany amin'ny fomba ofisialy ny ‘sivana haino aman-jery‘, raha nilaina nojeren'ny biraon'ny sivana ny vakiteny. Nilaza anefa ny Fiarovana Ankapobeny fa tsy natao izany.
Nokasaina hotontosaina tao amin'ny Teathra Zoukak tao Beirota ity lanonana nofoanana ity. Niditra tao amin'ny teathra ireo mpikambana ao amin'ny Fiarovana Ankapobeny sy ny sampana mpanao famotorana avy amin'ny polisy ary nanapaka ny famakiana maimaim-poana ny fandikana ho amin'ny teny Arabo ny tantara tsangana amin'ny teny Frantsay iray, ny “Ogres” nosoratan'i Yann Verburgh.
Notazonina nandritra ny alina i Hadi Damien, iray amin'ny mpikarakara ny Beirut Pride, ary taorian'ny fanerena avy amin'ny Fiarovana Ankapobeny, dia nanapa-kevitra ny Beirut Pride hampiato ny hetsika “amin'izao fotoana izao“.
Nandany ny alin'ny 14 ka hatramin'ny 15 mey tao amin'ny tobin'ny polisy ao Hobeiche malaza ao Beirota i Damien, fantatra amin'ny fampijaliana tahaka ny iray notaterin'ny gazety Libaney iray mivoaka isan'andro amin'ny teny frantsay L'Orient Le Jour (OLJ) io toby io, izay nisamborana, nikitakitaina ary nampijaliana mpivady pelaka tany Hobeiche sy ireo toeram-pitazonana hafa any Libanona.
Araka ny loharanom-baovaon'ny polisy niresaka tamin'ny OLJ, dia notazonina i Hadi Damien noho ny didy fanenjehana avy amin'ny fampanoavana ao Libanona. Nomena safidy izy na hanao sonia fifanekena hampitsahatra ny lanonan'ny Beirut Pride na halefa eny amin'ny mpitsara ny raharaha hanadihady azy amin'ny andinin-dalàna “mifandraika amin'ny fandrisihana ho amin'ny fahalotoam-pitondran-tena sy ny famotehana ny fahaiza-mitondra tena ampahibemaso amin'ny alalan'ny hetsika voarindra”.
Avy amin'ny toro-hevitry ny mpisolovava, dia nanapa-kevitra i Damien fa ny safidy tsara indrindra dia ny hanasonia ny fifanekena, ary dia navela hiala tao amin'ny tobin'ny polisy ny mpandrindra ny Beirut Pride.
Tamin'ny 15 mey ny Beirut Pride namoaka izao fanambaràna manaraka izao:
Tsy misy olona notazonina amin'izao fotoana izao, ary tsy maninona ny Beirut Pride. Miantona amin'izao fotoana izao ny lanonana nomanina eo ambany fanevan'ny Beirut Pride hatramin'ny 20 Mey 2018. Misaotra anareo noho ny fiahianareo sy ny fangorahanareo, ary mangataha amim-kitsimpo aminareo mba tsy hanao sahoan-dresakaa. Hanome fanazavana amin'ny antsipirihany izahay amin'ny alin'ny 9 alina ho fanazavana izay mitranga.
Nomelohin'ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena ny fanerena avy amin'ny manampahefana. Nanameloka ny fampanginana hetsika mitandro ny fitoniana ny avy ao amin'ny Proud Lebanon, izay miasa “hahatontosa ny fiarovana, ny fanomezan-kasina sy ny fitovian'herijika amin'ny vondrona voatosika ho eny anjorom-bala amin'ny alalan'ny karazan-tolotra ho an'ny fiarahamonina”, ary nanampy fa:
Fantatra hatrany amin'ny fanajana ny fahasamihafana i Libanona sy ny filazana fa firenena tsimialonjafy ho an'ny olom-pirenena REHETRA, na dia eo aza ny fahasamihafana. Eny fa na dia miara-mahita aza isika tao anatin'ny roa taona ny fanaovana ankivy tanteraka ny hetsika LGBTIQ+ tsy hidradradradra ampahibemaso ny fitadiavany fiarahana monina ao anaty fiaraha-monina tokony hiaro, tsimialonjafy ary mandray ny tsirairay.
Ny tolona mandeha amin'izao fotoana izao hiadiana amin'ny fankahalàna pelaka ao Libanona
Ao Libanona, voarara amin'ny filazana fa ‘tsy voajanahary’ ny firaisambatan'ny mitovy karazana (lahy sy lahy/vavy sy vavy): Raràn'ny Andininy 534 amin'ny Lalàna Ady Heloka Bevava Libaney “izay rehetra firaisam-batana mifanohitra amin'ny lalànan'ny natiora”. Tanelanelan'ny taona 2007 sy 2017 anefa, hitan'ny mpitsara efatrafa tsy tokony ampiharina amin'ny firaisambatana nifaneken'olona ampy taona mitovy taovam-pananahana ny lalàna.
Fa tsy nanakana ny fihoaram-pahefana ataon'ny governemanta libaney izany. Vao haingana no nitatitra ny Human Rights Watch (HRW) fa kapohina amin'ny taribin'herinaratra sy ampidirana tehim-by ankeriny ireo lehilahy pelaka sy ireo vehivavy niova fananahana. Hitan'ny HRW fa raha nahita fahombiazana ihany ireo vondrona mpikatroka libaney amin'ny “fampamenarana” ny servisin'ny polisy ao amin'ny Herim-Pilaminana Anatiny amin'ny “fandraketana ny fihoaram-pahefana sy famoahana ho fanta-bahoaka ny kaontin'ny lasibatra”, dia “tsy miraharaha loatra ny faneren'ny vahoaka” ny ao amin'ny Fiarovana Ankapobeny, “ka mahatonga ny fihoaram-pahefana ataon'ny Fiarovana Ankapobeny amin'ny olona LGBT ho sarotra toherina kokoa.”
Nofoanana ihany koa ny Beirut Pride taona 2017 noho ny fandrahonana avy amin'ny Ligin'ny Miozolomana Mpampianatra (Ulemas) ao Libanona (هيئة علماء المسلمين في لبنان). Niangaviana ihany koa ny vondrona Kristiana Orthodoksa “hivavaka hanoherana ny fandrahonan'ny homosexualité”
Ao amin'ny tranonkalany, ny Beirut Pride milaza ny tenany ho “sehatra fiaraha-miasa maka fijoroana tsara hanoherana ny fankahalana sy ny fanavakavahana mifototra amin'ny karazana sy ny fironana ara-nofo. […] ny Beirut Pride dia manana fijoroana manodidina ny 17 mey, Andro Iraisampirenena Hiadiana amin'ny Fankahalana Pelaka sy niova Fananahana.”
BEIRUT PRIDE FANAMARIHANA:
1. Tsy nihemotra ny Beirut Pride. Voarohirin'ireo hetsika mihantona, ary mbola mitohy ny tetikasany sy ny tetikasany.
2. Ny hetsika Beirut Pride dia nesorina tamin'ny fanapahan-kevitry ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Beyrouth, tsy miankina amin'ny fifanarahana, fanekena na fandavana an'i Hadi Damien. Tsy manam-pahefana "hanapa-kevitra ny hampiato ny fisehoan-javatra" izy, fanapahan-kevitra iray nahomby raha nosamborina na navotsotra izy. Ny fangatahana Hadi dia nasaina nanasonia dia ny hanaiky ny fanapahan-kevitry ny Lehiben'ny Fampanoavana. Ho an'ny fitantaràna feno momba ny fisamborana, miantsoa the Statement about the Suspension of Beirut Pride Events – 14 May 2018.
Beirut Pride 2018Beirut Pride May 24, 2018 Face Magazine, Italian, 24 May 2018, Custodia, Hadi Damien, Sospensione, Beirut Pride 2018, italiano, 24 maggio 2018, Detention, Suspension